राजनीति – Page2– Dhukdhuki fm
सर्लाही, मंसिर १७ – यहि मंसिर २१ गते बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी सर्लाहीका मतदानस्थल र केन्द्र तर्फ हिँडेका छन् । चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छापलगायतका सामग्रीहरु लिएर कर्मचारीहरु मतदान केन्द्र तिर लागेका सर्लाहीका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी भुजेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चुनावमा खटिएका कर्मचारीले मतदाता परिचयपत्र समेत लगेर[Read More…]
प्रचण्डका छोरा प्रकाशको निधन !!
काठमाडौं, मंसिर ३ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरा प्रकाशको निधन भएको छ । प्रकाशको निधन भएको पुष्टि नर्भिक अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. जेपी जयसवालले गर्नुभएको हो । अहिले नर्भिक अस्पताल थापाथलीमा नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको घुईंचो लागेको छ । झापाको बिर्तामोडमा बसेका प्रचण्ड हेलिकोप्टर चढेर भर्खरै काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ । उहाँ नर्भिक अस्पताल पुग्दै हुनुहुन्छ ।[Read More…]
by admin —	November 19, 2017 —	0 comments —	राजनीति, राष्ट्रिय खबर
सर्लाहीमा माओवादी नेता राजाकुमार राय प्रती उजुरी गर्न प्रमाण पुगेन : मुख्य निर्वाचन अधिकृत
सर्लाही, कार्तिक २० – सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य ‘ख’ मा बाम गठबन्धन का उमेदवार माओवादी नेता राजकुमार राय बिरुद्ध परेको उजुरी खारेज भएको छ । उनको समानुपातिक तर्फ पनि नाम रहेको भन्दै सोही क्षेत्रका अर्का एक स्वतन्त्र उमेदवारले क्षेत्र न–२ का निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी को आधारमा छानबिन गर्दा माओवादी नेता राय[Read More…]
by admin —	November 6, 2017 —	0 comments —	जनसरोकार, राजनीति, सर्लाही बिशेष